पानी शुद्धीकरणका लागि यूभी एलईडी बत्तीहरू → अकुवा ach नौका • क्याम्परहरू • घर
पानी शुद्धीकरणका लागि यूभी एलईडी बत्तीहरू
UV LED बत्तीहरू - प्रभावकारी र प्रयोगकर्ता-मैत्री को बारे मा जान्नुहोस् REVOLUTIONARY पानी शुद्धीकरण टेक्नोलोजी!
कसरी पानी सफा गर्ने?
सबैको दिमागमा आउने पहिलो चीज यो केहि मार्फत जान दिनु हो filtr.
फोहोर फिल्टरमा रहनेछ र हामी सफा हुनेछौं पानी.
जहाँसम्म, पानी सफा जस्तो देखिन्छ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, र यसका सामग्रीहरूमा सम्भावित हानिकारक, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि खतरनाक पनि छ भाइरस, ब्याक्टेरिया र अन्य सूक्ष्मजीवहरू?
फिल्टर मार्फत मात्र पारित गर्नाले केही गर्दैन। यो अवस्था मा, पानी सफा गर्नु पर्छर मात्र फिल्टर छैन।
पानी फिल्टर नगर्नुहोस् - यसलाई सफा गर्नुहोस्!
सफाई, उपचार वा कीटाणुशोधन एक यस्तो जटिल प्रक्रिया हो जुन गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, रसायनको प्रयोगको साथ।
ती मध्ये धेरैले प्राकृतिक वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ, विशेष जलीय जीवहरूमा। हामी पनि रसायनले आफूलाई विष दिन र फार्मेसीको भित्री चीजको सम्झना गराउँदैनौं।
त्यसोभए के प्रयोग गर्ने?
तपाईं ओजोन गर्न सक्नुहुन्छ। ओजोन उपचार प्रभावकारी रूपमा सफा र पानीको स्वाद गर्न तटस्थ छ। यद्यपि घरमा पानीको ओजनसन कल्पना गर्न गाह्रो छ।
त्यसो भए, कसरी छिटो, सस्तो, प्रभावकारी रूपमा, वातावरण मैत्री र बेस्वाद तरीकाले घरमा घर सफा गर्नुहोस् ... क्याम्पसाइटमा, याटमा, अफिसमा र पसलमा?
Acuva UV LED बत्तीहरू
हामी तपाइँलाई एक प्राविधिक उन्नत कम्पनी प्रस्तुत गर्दछौं अकुवा। हामी पोलिस मार्केटमा एकुवा उत्पादनहरूको विशेष र प्रत्यक्ष वितरक हौं।
Acuva पानी शुद्धिकरण किटहरू प्रयोग गर्दै छन् UV LED बत्तीहरू। यी क्यानाडामा डिजाइन गरिएको सबैभन्दा नयाँ उत्पादनका उत्पादनहरू हुन्।
पानी शुद्धीकरण Acuva प्रणालीहरु को उपयोग गरीरहेको छ १०० गुणा बढी प्रतिस्पर्धी विधिहरू भन्दा प्रभावकारी.
यसबाहेक, को उपयोग UV LED बत्तीहरू अकुवा उत्पादनहरूलाई घर र कार्यालयका लागि मात्र एक उत्तम समाधान बनाउँदछ, तर योटमा वा मोटरहोममा पानी शुद्ध गर्नका लागि पनि उत्कृष्ट छ।
Acuva UV-LED को उपयोग गरेर पानी शुद्धीकरण पछिल्लो टेक्निकल ज्ञान र धेरै पर्यावरणीय मा आधारित छ। क्लोरीन जस्ता कुनै रसायनहरू पानीमा परिचालित हुँदैनन्।
मेटिएकाहरू । 99,9999% ब्याक्टेरिया भाइरस र रोगजनक
पानीले मात्र कीटाणुशोधन पार गर्दछ, जसको परिणाम स्वरूप Bacteria 99,9999%% ब्याक्टेरिया, भाइरस र सबै अन्य रोगजनकाहरू हटाइएका छन्यसले स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ र जुन सजिलैसँग कुनै परम्परागत पानी फिल्टरबाट प्राप्त हुन्छ।
Acuva UV LED पानी शुद्धीकरणको प्रयोग गरेर हामी पहाडका खोला र तालहरूबाट पानी उपभोग गर्न सक्दछौं जुन पानीमा बस्ने ब्याक्टेरिया, भाइरस वा सूक्ष्मजीवहरूको सेवनले गर्दा हामी बिरामी हुनेछौं भन्ने डर बिना। UV LED बत्तीहरू भाइरसलाई मार्नेछ, सहित SARS-COV-2र ब्याक्टेरिया जसले पेटको समस्या निम्त्याउँछ।
UV-LED बत्तीहरू प्रयोग गरेर पानी शुद्धीकरणले यसको स्वादलाई असर गर्दैन। ब्याक्टेरिया, भाइरस र रोगजनक मर्छ, तर पानीको संरचना परिवर्तन हुँदैन। कुनै पनि पदार्थको परिचय दिइएको छैन, त्यसैले पानीको स्वाद एकदम पहिलेको जस्तै स्वाद गर्नु अघि यसलाई सफा गर्नु अघि भयो। यसको गन्ध र र either परिवर्तन हुँदैन। Acuva UV-LED शोधकले यसलाई प्रकाशित गर्नु भन्दा अधिक केही गर्दैन।
पानी शुद्धिकरणले यसलाई २ 250० र २280० एनएम बीचमा छोटो तरंगदैर्यको उपचारमा समावेश गर्दछ। यस्तो एक्सपोजरले पानीमा बस्ने सूक्ष्मजीवहरूको DNA विच्छेदन गर्दछ। नतिजा स्वरूप, पानी शुद्ध छ। सबै ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू र अन्य रोगजनकहरूका। 99,9999% मर्छन्।
यूवी बत्तीहरू प्रयोग गर्ने कीटाणुशोधन टेक्नोलोजीहरू हाल गहन विकासको क्रममा छन् र अधिक र अधिक अक्सर अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ।
यद्यपि तपाईलाई यो जान्न पनि आवश्यक पर्दैन, किनकि अकुवा युभी एलईडी प्रणालीहरूको प्रयोग एकदम सरल छ। तपाईं जटिल केहि ह्यान्डल गर्न छैन। तपाईले केहि सम्झनु आवश्यक छैन। Acuva UV LED पानी प्यूरिफायर सामान्य ट्यापको रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
यसबाहेक, Acuva UV-LED पानी शोधन प्रणाली आकार मा संक्षिप्त छन्। तिनीहरूले धेरै थोरै ठाउँ लिन्छन्, त्यसैले तिनीहरू कारभाँहरू, शिविरहरू र जहाजहरू, डु boats्गा र नौकामा उत्तम हुन्छन्।
तिनीहरू सजिलै ग्रीष्मकालीन घरहरू, पसलहरू, कार्यालयहरू, रेस्टुरेन्टहरू, साथै एकल र बहु-पारिवारिक घरहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पानी फिल्टरहरू विपरित, यूभी-एलईडी बत्तीहरू वस्तुतः मर्मत-रहित हुन्छन्।
तपाईंले कुनै पनि चीज सफा वा बदल्न आवश्यक पर्दैन। केहि बन्द छैन। फिल्टरमा फोहरको स्तर नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छैन। यहाँ, UV-LED बत्ती पानीमा चम्किन्छ।
एलईडी फ्लोरोसेंट बत्तीको प्रयोग पनि प्रयोगकर्ताको लागि ठूलो प्लस हो। सम्पूर्ण पानी प्रशोधन प्रणालीको मर्मत-रहित कार्यमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
Acuva एरो U UV-LED - एक ट्याप संग पानी शोधक
१०+ बर्षको सेवा जीवन
यो एक लामो वारंटी र एक जीवनभर छ। परम्परागत बल्बहरू नियमित रूपमा बदल्नु पर्छ। एलईडी फ्लोरोसेंट बत्तीहरूसँग १०+ वारेन्टी ग्यारेन्टी हुन्छ, तातो नहुनुहोस्, स्विच गरे पछि तुरुन्तै काम गर्नुहोस् र जलाउनु हुँदैन।
परम्परागत टेक्नोलोजीमा बनाइएको बत्तीहरूको विपरित, एकुवा युभी-एलईडी उत्पाद पनि अधिक वातावरण अनुकूल छ, किनभने त्यहाँ एलईडी बत्तीमा कुनै पारा छैन।
Acuva एरो5UV-LED - पानी शोधक
यूभी-एलईडी संग पनि पारंपरिक पारा बल्बमा आधारित UV प्रणाली भन्दा कम बिधुत खपत छ। Acuva UV-LED प्रणालीहरू ब्याट्री द्वारा संचालित हुनको लागि अनुकूलित गरियो। तिनीहरू १२V बिजुली आपूर्तिका साथै AC DC सँग जडान गर्न सकिन्छ।
Acuva उत्पादन को लगभग कुनै पनि प्रकार को उपयोग को लागी अनुकूलित प्रदान गर्दछ। UV-LED वाटर प्युरिफायरको विस्तृत दायराबाट, तपाईं उपकरणहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि प्रति मिनेट liters लिटरको क्षमता र life ००,००० लिटरको सेवा जीवन।
Acuva Eco NX-Silver UV-LED - एक ट्याप संग पानी शोधक
बोतलको पानीको बारेमा चिन्ता गर्न रोक्नुहोस् तपाईंको याट वा कारवाँमा। अफ-लाइन पानी प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई पिउँनु अघि Acuva UV-LED कीटाणुशोधन प्रणाली प्रयोग गरेर सफा गर्नुहोस्। आफ्नो डु boat्गामा र आरभी वा छुट्टी घरमा बिना पानीको सफा ट्याप पानीको आनन्द लिनुहोस्।
पानी शुद्धीकरण प्रणाली छनौट गर्दै अकुवा यूवी-एलईडी तपाईं उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू छनौट गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको घर, डु or्गा वा मोटरहोमको लागि सबैभन्दा स्वच्छ, बाँझ पानी प्रदान गर्दछ।
यूभी एलईडी बत्तीहरू बनाम। UV बत्तीहरू
परम्परागत यूभी पानी उपचार टेकनीले यूवी पारा बत्तीहरू प्रयोग गर्दछ। यद्यपि वातावरणीय प्रभाव र UV बत्तीको प्रदर्शन सीमितताको बारेमा गम्भीर चिन्ताहरू छन्।
acuvaacuva ecoacuva eco uv नेतृत्वacuva नेतृत्वमा यूवी पानी शोधन प्रणालीacuva शुद्धिकरण प्रणालीacuva टेक्नोलोजीहरूacuva टेक्नोलोजीहरू incAcuva UV LEDacuva यूवी पानी शोधकacuva पानीacuva पानी फिल्टरacuva पानी शोधन प्रणालीacuva पानी शोधकacuva पानी उपचार प्रणालीAllegro uv बत्तीहरूकीटाणुनाशक UV बत्तीUV LED कीटाणुनाशक बत्तीपानीको लागि कीटाणुनाशक UV बत्तीहरूजैविक पानी शुद्धीकरणचाहे यूभीको नेतृत्वमा बत्तीहरू हानिकारक छन्यूवी बत्तीहरू हानिकारक होयूवी पानी कीटाणुशोधनपानी उपचार कीटाणुशोधनपानी कीटाणुशोधनपानी कीटाणुशोधन विधिपिउने पानी को कीटाणुशोधनयूवी पानी कीटाणुशोधनपिउने पानी ट्याks्कीको कीटाणुशोधनघरेलु पानी शुद्धीकरणपानी बाँझो लागि uv नेतृत्व बत्तीकीटाणुनाशक बत्तीहरूएलईडी र यूभी बत्तीहरूएलईडी बत्तीहरू यूभी विकिरणनेतृत्वमा यूवी बत्तीहरूनेतृत्वमा यूवी बत्तीहरू समीक्षाUV बत्तीहरूयूवी वा एलईडी बत्तीहरूपानीको लागि यूभी बत्तीहरूयूवी र नेतृत्व बत्तीहरूयूवी बत्तीहरू नेतृत्वयूवी दीपक समीक्षा नेतृत्वपानीमा नेतृत्वउत्तम नेतृत्वमा यूवी बत्तीहरूसर्वश्रेष्ठ यूवी नेतृत्व बत्तीहरूपानी शुद्धीकरणवर्षा पानी उपचारपिउने पानीको शुद्धिकरणऔद्योगिक पानी उपचारबाँच्नको पानी शुद्धिकरणघरको पानी शुद्धीकरणइनारमा पानी शुद्धीकरणधारा पानी शुद्धीकरणइनारबाट पानी शुद्धीकरणपानी शुद्धीकरणUV sterilizerपराबैंगनी पानी शोधकयूवी नेतृत्व पानी शुद्धिकरणयूवी नेतृत्व पानी उपचारयूवी पानी उपचार प्रणालीयूभी नेतृत्वमा पानी शोधनपानी शुद्ध गर्ने कम्पनीnsf प्रमाणित के होयाटमा पानीमोटोहोममा पानीयूभी बत्तीका लागि बल्बको नेतृत्वयूभी बत्तीका लागि बल्ब नेतृत्व
अन्य उत्पादनहरू हेर्नुहोस्:
हात कीटाणुशोधन स्टेशनहरू
पानी वितरण गर्ने
पार्क र खेल सुविधा
उल। फोर्ट Służew 1b / 10 फोर्ट 8
दूरभाष: +48 502०२ ० 091 ०११ 710१० EMAIL: Office@waterPoint.pl
वाटरपोइन्ट प्रतिलिपि अधिकार © २०२०
डिजाइन र कार्यान्वयन: pixelsperfect.pl - वेबसाइटहरू Poznań